शुक्र ग्रहले गर्दैछ राशि परिवर्तन, यी राशिका लागि अत्यन्त शुभ ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/शुक्र ग्रहले गर्दैछ राशि परिवर्तन, यी राशिका लागि अत्यन्त शुभ !
जीवोत्त्पत्तिको कारक मानिने शुक्र ग्रह ३१ अगस्टको रात मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दैछ। यस राशिको स्वामी चन्द्रमा हो, जसले शुक्र समभाव राख्छ। शुक्रको राशि परिवर्तनले सबै १२ वटै राशिमा प्रभाव पार्छ।
राशिको चतुर्थ भावमा शुक्रको प्रवेशले यस राशिका मानिसमा मानसिक अशान्ति उत्पन्न गराउन सक्छ। स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। धनहानि हुने योग रहेकोले आर्थिक लेन-देन गर्दा सावधान रहनुहोला। व्यापार क्षेत्रमा भने समय शुभ रहेको छ। घर जग्गा तथा वाहन खरिद-बिक्रि गर्नको लागि पनि समय उत्तम देखिन्छ।
यस राशिको स्वामी शुक्र ग्रह हो। स्वामी ग्रहको पराक्रम भावमा प्रवेश गर्दा यस राशिका व्यक्तिको साहसमा वृद्धि हुनेछ। घर परिवारमा आफू भन्दा अग्रजसँग बिचारमा मदभेद हुने देखिन्छ। धर्म कर्म क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। यात्रा गर्दा विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा कामका लागि आवेदन दिन पनि समय शुभ रहेको देखिन्छ।
राशिको धन भावमा शुक्रको प्रवेशले मिश्रित फल दिनेछ। हृदय सम्बन्धि र आँखा सम्बन्धि स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ। घर-जग्गा सम्बन्धि आर्थिक कारोबार सफल रहने देखिन्छ। अष्टम भावमा शुक्रको दृष्टिको कारण कार्यक्षेत्रमा विरोधीको प्रभाव बढ्नेछ। समाजमा भने मान-प्रतिष्ठा बढ्नेछ। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्न सल्लाह दिईन्छ। कानुनी मामलाबाट टाढा रहनु नै राम्रो होला।
यस राशिका मानिसलाई शुक्रको गोचरले मानसिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा समय प्रतिकूल रहने देखिन्छ। नयाँ कार्य गर्नको लागि समय अत्यन्त उत्तम रहेको छ। वैवाहिक छलफल सफल रहनेछ। उच्च पदाधिकारीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न जरूरी देखिन्छ। ससुराल पक्षबाट भरपूर सहयोग मिल्ने सम्भावना रहेको छ।
शुक्र यस्तो राशिको जसले राशिको व्यय भावमा रहेर शुभ फल दिन्छ। आँखा सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ। अत्याधिक यात्राको कारण श्सृरिक थकानको महशुस हुनेछ। शत्रु मजबूत हुने भएका कारण सतर्क रहनु पर्ने देखिन्छ। कानुनी मामलामा नजिता तपाईंतिर नै आउनेछ। महिलाको माइती पक्षबाट सहयोग मिल्ने देखिन्छ। ऋण लिँदा विशेष ध्यान राख्नुहोला।
राशिको लाभ भावमा शुक्रको गोचरले आयका स्रोत बढ्नेछ। परिवारमा अग्रज तथा दाजु-भाईसँग मदभेद हुनसक्छ। नयाँ कार्य तथा व्यवसाय सुरु गर्नको लागि समय अनुकूल रहेको छ। आर्थिक पक्ष मजबूत रहे देखिन्छ। कहिँ फसेको धन पनि फिर्ता आउनसक्छ। सन्तान सम्बन्धि चिन्ताबाट मुक्ति मिल्नेछ। नव दम्पतिलाई सन्तान प्राप्तको योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ।
राशिको स्वामी ग्रहको दशम भावमा प्रवेश यस राशिका मानिसको लागि अत्यन्त शुभ रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा तपाईंको प्रभाव बढ्नेछ। पदोन्नतीको योग रहेको छ। केन्द्र तथा सरकारी क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक लाभ प्राप्तिको योग रहेको छ। मित्रगण तथा आफन्तजनबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ। भाग्य वृद्धिको योग रहेको छ।
राशिको भाग्य भावमा शुक्रको प्रवेश केहि कार्य वाधाका साथै अन्य राम्रो सफलता दिलाउनेछ। वैदेशिक क्षेत्रसँग जोडिएका कार्य सफल रहनेछन्। धर्म-कर्मका कार्यमा उपस्थित हुने अवसर मिल्नेछ। नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि समय अनुकूल रहेको छ। प्रतियोगीहरुको लागि समय अत्यन्त शुभ रहेको छ।
राशिको अष्टम भावमा शुक्रको प्रवेशले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, खासगरि हृदय र पेट सम्बन्धि समस्या आउनसक्छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। कर्यक्षेत्रमा समय अनुकूल देखिदैन। अनावश्यक वाद-विवादबाट बच्नुहोला। आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ। आर्थिक लेन-देनको लागि समय अत्यन्त उत्तम रहेको छ।
राशिको सप्तम भावमा शुक्रको प्रवेश दाम्पत्य जीवनमा केहि समस्या ल्याउन सक्छ। वैवाहिक वार्ता भने सफल हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा समय अत्यन्त शुभ रहेको छ। सरकारी क्षेत्रमा विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। यात्राको योग रहेको छ जसबाट लाभ पनि मिल्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा आवेदन दिनको लागि पनि समय शुभ रहेको छ। सामाजिक मान-सम्मानमा वृद्धि हुनेछ।
राशिको शत्रु भावमा शुक्रको प्रवेशको कारण शत्रु मजबूत हुनेछन् साथै कुनै प्रकारको हानि पुर्याउन सक्छन्, सतर्क रहनुहोला। आमा-बुवाको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्नसक्छ। कानुनी चक्करमा नापरेकै राम्रो हुनेछ। अत्याधिक खर्च हुँदा आर्थिक पक्ष कमजोर रहला। मित्रगणबाट विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ।
राशिको पन्चम भावमा शुक्रको प्रवेशले शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता ल्याउनेछ। प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको स्थिति आउनसक्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अत्यन्त शुभ रहेको छ। नव दम्पतिको लागि सन्तान प्राप्तिको योग रहेको छ। सन्तान सम्बन्धि चिन्ताबाट मुक्ति मिल्नेछ। आयका स्रोत बढ्नेछन्। कर्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीसंग मनमुटावको अवस्था सिर्जना